induction kululeynta codsiyada caafimaadka iyo ilkaha ee warshadaha caafimaadka
Kuleylka kuleylka kuleylka ee codsiyada caafimaadka iyo ilkaha-nidaamyada kululaynta induction ee warshadaha caafimaadka iyo ilkaha
Kuleylka induction waxaa si weyn looga isticmaalaa gudaha caafimaadka iyo warshadaha ilkaha. Soo-saarayaasha qalabka caafimaadka waxay ka faa'iideystaan ​​tikniyoolajiyadda kululaynta induction. Waxay bixisaa nadiif ah, kooban, soo noqnoqod leh, bey'aduna waa nabad galyo la'aan ololka furan ama qiiqa sunta ah. Waxaa loo isticmaalaa shaybaarada yaryar iyo sidoo kale xarumaha wax soo saarka waaweyn.
Sannadihii ugu dambeeyay hay'adaha cilmi-baarista caafimaad ee aad iyo aad u tiro badan ayaa u isticmaalaya kuleylinta kuleylka baaritaanka daaweynta nanoparticle iyo electromagnetic hyperthermia. HLQ DW-UHF qalabka kululaynta induction waxaa loogu talagalay si gaar ah iyadoo codsigan maskaxda lagu hayo. Nidaamka kuleylka kuleylka ee HLQ waxaa looga isticmaalaa Jaamacado badan iyo tas-hiilaad cilmi baaris ah oo adduunka ah.
Sidee Kuleylka Induction loogu adeegsadaa Warshadaha Caafimaadka & Ilkaha?
Nanoparticle iyo baaritaanka daaweynta hyperthermia
Ku shubista ilkaha ilkaha ilkaha iyo qalab caafimaad
Tijaabinta Kateetarka si ay u sameyso talooyinka kateetarrada caafimaadka
Ka-hortagidda isku-xirnaanta wax soo saarka dawooyinka ama soo-saarista biomedical
Daaweynta kuleylka ee aaladaha xusuusta ee codsiyada caafimaadka
Qalabka irbadda iyo qalliinka ayaa daaweynaya kuleylka iyo kuleylka
Daawada ama kuleylka dhiigga ee kuleylka qalabka IV
Nidaamyada kuleylka kuleylka waxaa loo adeegsadaa habab badan oo ka mid ah warshadaha Caafimaadka. Nooca codsiyada kuleylinta Induction waxaad ka heli doontaa samaynta caarada kateetarka, qoditaanka daloolinta ilkaha ee biraha, balaastikada isku xidhka birta iyo qaar kaloo badan.
Faa'iidooyin badan ayaa ku jira isticmaalka kuleylka kuleylka ee ku dhex jira warshadaha Caafimaadka. Faa'iidooyinka waa nidaam aad u nadiif ah oo aan kululeynin kululaynta kaas oo tamarta hufan leh iyo geedi socod kululeyn sumcad leh. Kuleylka kuleylintu waa hab aad u dhakhso badan oo loogu kululeeyo qaybahaaga hab lagu qanci karo. Tani waxay gacan ka geysan doontaa hagaajinta soosaarkaaga wax soosaarka iyo hagaajinta Tayada.
Xalalka isdabamarinta induction waxay leedahay aqoon sanado badan oo ka dhexjirta warshadaha Caafimaadka oo ka taageeraya macaamiisha shaqada horumarka cusub iyo ka caawinta naqshadaha gariiradda cusub ee qaybaha cusub. Solutions Coil Induction ayaa sidoo kale ka caawisay shirkado badan oo buluug-buluug ah inay ilaashadaan khadadka wax soosaarka oo ay la socdaan midabyo cusub oo kuleylinta Induction ah, ama dayactir kuleylka kuleylka kuleylka ah.
Xalka Soosaarida Qalabka Caafimaadka iyo Ilkaha
Dhaqaalaha adduunka ee maalinba maalinta ka dambeysa sii kordhaya, shirkadaha soo saara qalabka caafimaadka ayaa si isdaba joog ah u raadinaya qaabab ay hoos ugu dhigaan qarashyada wax soo saarka isla markaana u dardargeliyaan waqtiga suuqa. Isla mar ahaantaana, tayada wax soo saarka oo hagaagsan iyo joogtaynta wax soo saarku gabi ahaanba waa lama huraan; ma jiri karaan dariiqooyin-toobiye marka nolosha bukaanka iyo ladnaankiisu ay khatar ku jiraan.
Soosaarayaasha qalabka caafimaadka waxay u jeestaan ​​tiknoolajiyada kuleylka ee kuleylka si ay uga caawiyaan la kulanka wax soo saarkooda, qiimaha iyo ujeedooyinka tayada leh. Kuleylka kuleylintu waa hab deg deg ah, nadiif ah, oo aan lala xiriirin oo keenaya kuleylka noocyo badan oo bir ah oo ku soo biiraya iyo codsiyada daaweynta kuleylka. Marka la barbardhigo qulqulka, shucaaca, ololka furan ama hababka kale ee kululaynta, kululaynta induction waxay bixisaa faa'iidooyin wax ku ool ah.
Kordhinta joogtada ah ee xakamaynta heerkulka adag ee gobolka & nidaamyada kormeerka wareegga xiran
Waxsoosaarka ugu sarreeya ee hawlgalka unugga; ma laha waqti qoyn ama wareegyo qabow oo dheer
Tayada lagu hagaajiyay iyadoo la yareeyay baakada alaabada, dhalanrog iyo diidmada qiimaha
Nolol dheereyn dheeri ah oo leh kuleyl gaar ah oo goobta gaar u ah oo aan kululeyn qaybaha ku hareeraysan
Deegaanka ka dhawaaji olol la'aan, qiiq, kuleylka qashinka, qiiqa wasakhda leh ama sawaxanka weyn
Isticmaalka tamarta oo yaraatay ilaa 80% hawlgal tamarta ku habboon
Waxaa ka mid ah codsiyada soo saarida qalabka caafimaadka badan ee kululaynta induction:
Quudinta Tuubbada Isku-xidhka ah ee Ku Jira Hawada Ilaalinta
Iyadoo koronto 20kW ah, kululaynta induction waxaa loo isticmaali karaa in lagu kululeeyo tuubbada birta ah illaa 2000 ° F si loogu shubo xaddiga 1.4 inji ilbiriqsi kasta.
Qaybaha Xadhigga Birta Birta ah
Codsigan waxaan u adeegsanay jawi aan firfircooneyn si aan u xakameyno qaybo ka mid ah qaybaha orthodontic at 1300 ° F gudaha 1 ilbiriqsi
Dejinta Heat Nitinol Medical Subtends
Kuleylinta kuleylka ayaa loo isticmaalay in lagu kululeeyo dhagxaan caafimaad oo ku yaal mantor si loo dhigo cabir sax ah laba daqiiqo 510 ° C
Xayiraadda Saddexda Goobood ee Wadajirka ah ee Diyaaradda Ilkaha
Xaqa leh naqshad sameynta kuleylka kuleylka, waa suurtagal in hal mar la wada xajiyo seddex isku-dhaf ah. Toban ilbiriqsi gudahood, seddex isgoys oo ku yaal galka tijaabada ilkaha ee daawada ayaa lagu kululeeyay 1400 ° F si loogu xajiyo iyadoo la hagaajinayo isugeynta dhalidda iyo waqtiga wareegga oo yaraaday.
Kuleylka kuleylka Xiriiriyaha korantada ee xarigga ah ee Shell Balaastik ah
Natiijooyin isdaba-joog ah, natiijooyin soo-celin ah ayaa lagu gaadhay 500 ° F oo leh 10 wareeg oo kuleyl ah. Isku xiraha korantada ayaa si adag ugu xirnaa qolofka balaastigga ah iyada oo aan wax dhalaalayn ama midab beddelin.
Categories Technologies Tags kululaynta caafimaadka, Caafimaadka HF, indha indheynta indha indheynta, kululaynta ilkaha induction, Ilkaha kululaynta ilkaha, induction kululeynta caafimaadka, Ilkaha kululaynta ilkaha caafimaadka, warshadaha caafimaadka kululaynta induction, Mashiinka daaweynta kululaynta induction, kululeeyaha caafimaadka induction, kululeeyaha induction ee caafimaadka Post navigation